Suuqi nna hanafi
Daatubeeze borreessate, muccisate daatubeeze fanate, woy haaroo shae surkate hasirattowa badanno.
Ee, daatubeeze borreessie
LibreOffice hinkiilokki giddo daatubeeze borreessate doori. Borreessammete gedensaanni, daatubeeze Illachu - Daatu Bu'a xulaallo giddo leelltino. Bortajete giddo daatubeeze barubba surkama dandiitanno ged (Surki - Barubba - Wole) woy sokkate gaxira borreessa noohe.
Dee'ni daatubeeze borreessitooti
Daatubeeze mashalaqqekalaqantino daatubeeze fayile giddo calla agarate doori.
Daatubeeze muccisate fani
Daatubeeze gano muccisa dandaatto darga, daatubeeze leellishate doorie.
Shaete kaa'laancho horoonsidhe shaubba kalaqi
Shaete kaa'laancho woshshate daatubeeze Kaa'laanchi goofihu gedensaanni doori.
Title is: Suuqi nna hanafi